Iibso Universal 360 Rotation Air Vent Mount Baseus Magnetic Car Phone Holder - Shixnad Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Universal 360 Wareegista Hawada Mount Baseus Magnetic Car Phone Holder
Color Gudbinta Taleefanka Casaanka Taleefanka Haye Qalin Dahab Telefoonka Haya Taleefanka Haye Madow
Gudbinta Taleefanka Casaanka Taleefanka Haye Qalin Dahab Telefoonka Haya Taleefanka Haye Madow
Universal 360 Wareegista Hawada ee Mount Baseus Magnetic Car Phone Holder - Taleefanka Taleefanka Cas gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nambarka Tusaalaha: 421261
Nooca: Holder Car Hawada Hawada
Ku habboon: taleefanka gacanta 4-6 inji
Waxyaabaha: Daawaha Aluminium + Silicon
Ku rakib dariiqa: Nooca Qabashada
Meel Go'an: Hawo hawo-qaadasho
Midab: Madoow / qalin / Dahab / Casaan
Shaqada: gaariga heysta
Feature: Haysta taleefanka gaariga
Adeegso: Haysta taleefanka birlabta ah, Haysta Taleefanka Gacanta Car
aad u xoog badan. xoog magnetic waa xoog badan yahay sidoo kale. wuxuu leeyahay 2 qof oo haya fiilooyinka. waxaa ku jira hal goobaabin bir ah iyo mid wareegsan oo bir ah oo taleefanka loogu talagalay.
Haystaha wanaagsan ee taleefanka! Magnet tayo fiican leh, telefoonka si adag ayaa loo hayaa. Waxaan haystaa kiis taleefankeyga halkaas oo galinta ay bir tahay gudaha, sidaa darteed kii haystay ee ka horreeyey ayaa qaban waayay taleefanka. Qofkaan haystaa si fiican ayuu taleefankayga u hayaa, haa, si mararka qaarkood ay u qaadato dadaal in taleefanka laga gooyo qofka haya. Meelaha leexashada hawo -mareenka ee Hyundai Solaris aad bay u xajisaa. Laakiin kuwa haysta fiilooyinka ayaa ka samaysan caag aad u jilicsan. Godadku aad bay u yar yihiin. Waxaan haystaa silig lacag badan aad uga sii dhumuc weyn, sidaa darteed hayahaan aniga ayaa ii noqday mid aan waxtar lahayn. Inta kale wax walba aad bay u wanaagsan yihiin! Alaab weyn! Oo waxay u muuqataa mid wanaagsan! Waa hagaag, iibiyaha ayaa sidoo kale wanaagsan! Had iyo jeer si dhaqso leh oo dhakhso leh ayey u soo dirtaa alaab tayo sare leh!
Tayo aad u fiican, waxay dareemeysaa bir iyo aad u adkaysi. Wuxuu ku xiran yahay baabuurka xoog weyn iyo birlabyo sidoo kale, oo leh birlabyada ay keento waxay ahaanaysaa mid aad u fiican, waxaan leeyahay calaamado magnet oo kale si fiican bayna u shaqaysaa. Iibiye heer sare ah. Wuxuu yimid 19 maalmood gudahood Puebla, Mexico. Way xoog badan tahay birlabtu, laakiin haddii dhaq -dhaqaaq badan oo kedis ahi hoos u dhaco, markaa haddii aad aragto waxaa jira dhaq -dhaqaaq badan oo kedis ah, iska qaad oo dib u celi qolka.
Xidhmada ayaa xoogaa jidka ku soo dhacday, laakiin alaabtu ma soo gaadhin! Waxay u egtahay mid tayo leh) Waxaan ku rakibi doonaa gaariga, waxaan ku dari doonaa dib u eegis
Sida had iyo jeer calaamad wanaagsan iyo tayo leh. In kasta oo sanduuqii khaldamay, taageerada oo xaalad fiican ku jirta.